Finanka ka soo baxa qaybaha kala duwan ee jidhka ayaa tilmaamaya cuduro kala duwan. – Noor Health Life
Finanka ka soo baxa qaybaha kala duwan ee jidhka ayaa tilmaamaya cuduro kala duwan.
Habka finanku ugu dhaco jidhkeena waa dabiici laakiin haddii ay bilaabaan inay ka sii daraan qayb gaar ah markaa waxay muujinayaan cudur.
Haddii finan ka soo baxaan qaybtan, waxay calaamad u tahay dhaawaca qanjidhada adrenal.
Cadaadiska badan ee shaqada iyo walbahaarka ayaa sidoo kale keeni kara nabarro ku dhaca qeybtan jirka,sidoo kale waa calaamad muujinaysa daciifnimada difaaca jirka ee ha welwelin oo isdeji.
Noor Health Zindagi waxa ay isku dayaysaa in aad sida ugu fiican adiga iyo dhakhaatiirta waaweyn ee leh Noor Health Zindagi. Dhakhtarka qaliinka La-taliye. Professoro. Working Noor Health Life waxay caawisaa dadka saboolka ah waxaana kaa codsanaynaa inaad ka qayb qaadato shaqadan oo aad taageerto Noor Health Life. Akhri wax dheeraad ah.
Haddii finanku ay ka soo baxaan laabta, waxay la macno tahay in habka dheefshiidkaagu aanu si sax ah u shaqayn oo waa inaad beddeshaa cuntadaada.
Sababta finanka ayaa ah fiitamiino la’aan.Taas macnaheedu maaha inaad bilowdo qaadashada fitamiinada dheeriga ah laakiin aad ka buuxiso yaraanta cuntada.
Sababtu waxa weeye kor u kaca heerka sonkorta ee jidhka, sidaa awgeed ha isticmaalin sonkorta iyo rootiga, laakiin ku qanacsanow khudaarta iyo khudradda.
Lugaha ka sarreeya oo ka hooseeya jilibka
Haddii aad isticmaalayso saabuun aan ku habboonayn maqaarkaaga, markaa meeshan waxaa ka soo baxa finan, markaa hubi saabuuntaada, sababta kale ee tani waxay noqon kartaa caabuq maqaarka ah.
Qaybta sare iyo dhexe ee dhexda
Haddii aadan helin hurdo kugu filan, finan ayaa ka soo baxaya meeshan, si la mid ah waxaad isticmaashaa cuntooyin qani ku ah kalooriyada.
Sababta finanka ayaa sidoo kale ah dhibaato dheefshiidka, sidoo kale waxay muujineysaa inaadan cunin cunto wanaagsan. Sababaha iyo daawaynta finanka.
Inta badan ma naqaano sababta ay finan uga soo baxaan wajiga,ma jirto sabab gaar ah oo ilkahoodu u soo baxaan balse waxaa jiri kara sababo badan,qaar ka mid ah sababaha iyo daawadooda waa kuwan aan ka hadalno. faahfaahinta qaar
Cunto-dheelitir la’aanta iyo qaadashada karbohaydraytyada saafiga ah ee loo yaqaan ‘carbohydratest saafiga ah’ waxay sababi kartaa finan da ‘kasta. iyo follicles bararka.Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa cuntadaada mid caafimaad leh oo dheeli tiran.
Tignoolajiyada casriga ah ee loo yaqaan ‘blue light therapy’ ayaa maanta la isticmaalayaa si looga saaro finanka wajiga, falaadhahan buluuga ah ee xoogga badan ayaa maqaarka ka soo gala xudunta laf dhabarta, waxayna dilaan bakteeriyada, waxay keeni kartaa casaan maqaarka laakiin waa ku meel gaar, haddii miisaaniyadaada kuu ogolaato. , daawayntani waxa ay u fiican tahay in laga takhaluso finanka iyo in maqaarka cad soo baxo.
Saliid shaaha ah oo aad loo jecel yahay oo khafiif ah marka loo eego benzoyl peroxide waxay faa’iido u leedahay daawaynta dhammaan noocyada finanka ee da ‘kasta.Salida geedka shaaha waxay leedahay sifooyin antiseptic dabiici ah oo nadiifiya daloolada xiran iyo maqaarka, waxay sidoo kale ka hortagtaa sii deynta saliidda xad-dhaafka ah ee dusha sare. waxayna si dabiici ah u yaraynaysaa bararka maqaarka, Saliidani waxa kale oo loo isticmaalaa dawooyin badan, waji-dhaqashada iyo saabuunta.
Dhakhaatiirta maqaarka iyo khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in ay yareeyaan milixda cuntada ku jirta,Noor Health Life waxa ay sheegtay in waxyaabaha ugu waaweyn ee keena finanka ay ka mid tahay qaadashada Sodium-ta oo aad u badata,si gaar ah u taxaddar marka aad dibadda wax ka cunayso,waxa fiican in aad isticmaasho wax ka yar. 1500 mg oo sodium ah maalintii.
Cadaadisku waxa uu saamayn taban ku yeeshaa shaqada hormoonnada, Stress-ku si toos ah uma laha maqaarka laakiin mar kasta oo aad werwersan tahay waxa maqaarkaaga ka soo baxa finan, korodhka kaas oo sidoo kale saameeya qanjidhada soo saara saliidda jidhka, fikirka, jimicsiga ama wax kale Habka waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo walbahaarka kaas oo dejin kara xaaladdaada maskaxeed.
Natiijooyinka ugu wanaagsan, waxaa muhiim ah inaad la tashato dhakhtarka maqaarka oo wanaagsan oo isbeddel ku habboon ku leh cuntadaada iyo qaab nololeedkaaga Cudurrada ka soo baxa maqaarka.
Calaamadaha ugu horreeya ee cudurrada qaarkood waxay ka muuqdaan maqaarka.
Maqaarku waa xubinta ugu weyn ee jidhka bini’aadamka laakiin ma ogtahay in uu sidoo kale saadaaliyo cudurrada?
Haa, calaamadaha ugu horreeya ee cudurrada qaarkood ayaa ka muuqda maqaarka.
Laakin ma ka warqabtaa calaamadaha uu maqaarku ku muujinayo cudurrada kala duwan?
Waxaa la aaminsan yahay in bursitis-ku uu yahay fal-celin ka timaada caanaha la cabbo ka dib cunista kalluunka, laakiin cilmiga caafimaadka ayaa taas beeniyay, run ahaantii, waxay dhacdaa marka maqaarku uu soo baxo dabiiciga ah Unugyadu waxay joojiyaan soo saarista walxo midab leh oo gaar ah, muuqaalka baro cadcad oo muuqda. Maqaarka ayaa dhab ahaantii weerar ku ah unugyada maqaarka ee habka difaaca jirka, kaas oo ku yaal melanin, midabka midabka maqaarka, sidoo kale waxay calaamad u noqon kartaa cudurrada difaaca jirka sida cudurka thyroid.
Baro qallalan, cuncun, iyo baro guduudan oo maqaarka ah ayaa inta badan ka soo baxa qoorta ama suxulada agtooda, waa cudur maqaarka ku badan oo ku dhaca carruurta iyo dadka waaweyn labadaba, laakiin sidoo kale waxay calaamad u noqon kartaa dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Sida laga soo xigtay cilmi-baaris Maraykan ah, dadka qaba niyad-jabka ama walbahaarka waxay u badan tahay inay hore u qaadaan cudurka, laakiin daawaynta dermatitis waxay sidoo kale wanaajisaa caafimaadka maskaxda.
Sonkorta dhiiga oo raagta waxay saamaysaa wareegga dhiigga waxayna dhaawacdaa neerfayaasha, waxayna saamaynaysaa awoodda uu jidhku u leeyahay in uu bogsiiyo nabarrada gaar ahaan lugaha, taasoo keenta cudurka macaanka, sidoo kale waxaa loo yaqaan Fistula.
Cudurkan maqaarka, qolofku waxay ka soo baxaan maqaarka iyo cuncun iyo cuncun, laakiin waxay sidoo kale tilmaamayaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in dadka xanuunkan qaba ay 58% khatar ugu jiraan wadne xanuunka halka 43% ay sare u kacdo khatarta istaroogga. Waxa ay khubaradu sheegeen in cudurka psoriasis iyo xinjirowga dhiigga ee xididdada dhiigga ay ka dhashaan caabuq, arrintanina waxa ay isku xidhaysaa labadooda.
Badar casaan ah ama labis
Cudurkan ayaa sababa in maqaarka uu isu rogo casaan, waxaana ka soo baxa basbaas, dadka badankiisu ma daaweeyaan, sababtoo ah uma arkaan inay waxyeello leedahay, balse cilmi-baaris cusub ayaa sheegtay in xaaladdan ay kordhisay halista asaasaqa ee haweenka 28%. da’da ayaa ka weyn 50 ama 60 sano.
Lugaha maqaarka engegan oo dillaacsan
Tani waxay calaamad u noqon kartaa dhibaatooyinka qanjidhada tayroodhka (gaar ahaan qanjidhada u dhow marinka dabaysha), gaar ahaan marka aanay waxtar lahayn in la daryeelo qoyaanka cagaha. Marka ay dhibaato ka jirto qanjidhada tayroodh, ma awoodo inay soo saarto hormoonnada tayroodhka kuwaas oo ka shaqeeya heerka dheef-shiid kiimikaadka, cadaadiska dhiigga, korriinka murqaha iyo habdhiska dareenka. Sida laga soo xigtay cilmi-baaris caafimaad, natiijada dhibaatooyinka Thai Ride, maqaarku wuxuu noqdaa mid aad u engegan, gaar ahaan maqaarka cagaha ayaa bilaaba inuu dillaaco, kaliya faa’iido ayay leedahay inaad aragto dhakhtar haddii xaaladdu aysan soo roonayn.
Gacmaha ku dhidid
Dhididka faraha badan ee gacmaha ayaa u horseedi kara cudurka thyroid-ka iyo sidoo kale dhidid badan, kaas oo qanjidhada dhididka ay noqdaan kuwo firfircoon. Dadka intiisa badan waxay dhibkan kala kulmaan hal ama laba qaybood oo jidhka ka mid ah sida kilkilooyinka, calaacalaha ama cagaha. Dhakhaatiirtu way baadhi karaan oo u qori karaan daaweyn.
Burooyin madow ama burooyin
Guud ahaan, burooyinka madow ee caanka ah ama kuuskuusku waxay noqon karaan calaamad kansarka maqaarka, halka ay sidoo kale kordhiyaan halista kansarka naasaha, kaadiheysta iyo kansarka kelyaha. Sida ay khubaradu sheegeen, in qorraxda lagu socdo oo yaraada, firfircoonida, cuntada caafimaadka qabta iyo ka fogaanshaha khamriga ayaa lagama maarmaan u ah si looga fogaado kansarka dilaaga ah. noormedlife@gmail.com